Izindlu Zezinhlekelele ze-Airbnb - Izindlu zababaleki
Izindlu Zezinhlekelele · Izindlu Zababaleki
Bungaza abantu abasanda kufika abeza edolobheni lakho
Nikeza mahhala, izindlu zesikhashana kubantu abadinga indawo yokuyibiza ikhaya.
Lokho okunikezayo nalokho okutholayo:
Ababaleki abaya edolobheni elisha babhekene nezinselele eziningi. Nakuba abaningi babo besekelwa ngumuntu osebenza odabeni lwabo, izindlu ezizinzile zingaba nzima ukutholakala. Ukuba nendawo, yesikhashana yamahhala kubanikeza ukuthula-kwengqondo ngenkathi beqala impilo yabo entsha.
Ikhaya lakho lingasiza othile ukuba azinze emphakathini wakhe omusha.
Bengifuna ukubuyisela ngokuthile, futhi ngicabanga ukuthi ngibuyelwe okuningi kakhulu ngokwami.
Umbungazi Wezindlu Zezinhlekelele
Ababaleki bathole ukukhoseliswa futhi baqala inqubo yokuhlaliseka edolobheni labo elisha ngokusekelwa kwabalingani bethu abangenzi inzuzo. Ungasiza ukubamukela emphakathini wakini ngenkathi basakha ubudlelwano obuzobasekela noshintsho ekutholeni indawo yesikhathi eside.
Abafuna ukukhoseliswa sebevele bacelile ukukhoseliswa ezweni lakho. Yize bethola ukusekelwa okuvela kubalingani bethu abangenzi inzuzo, le nqubo ayiqinisekisiwe futhi ingathatha isikhathi. Ubungabanikeza indawo ephephile futhi ezinzile ukuze bahlale kuyo ngenkathi isicelo sabo sosizo sibuyekezwa.
Iphrofayili yakho izosiza abalingani bethu abangenzi inzuzo ukuthi bakuhlanganise namaklayenti abo. Uzocelwa imininingwane efana negama lakho eligcwele, isithombe sephrofayili, nekheli le-imeyili. Ungahlanganyela yini futhi ngokuthi kungani ukhathala ngokunikeza lolu sizo.
Sitshele ngendawo yakho! Sazise lapho sitholakala khona, bangaki abantu abangakwazi ukuhlala kuyo, futhi itholakala nini. Uma usuvele ungumbungazi, ungakhetha indlu esikhona.
Ngisebenzela inhlangano esiza abasanda kufika abalahlekelwe amakhaya abo futhi abazama ukuqala kabusha izimpilo zabo.
Abalingani bethu abangenzi inzuzo benzela amaklayenti ukubhukha, futhi bazokuthumela umyalezo uma becabanga ukuthi indawo yakho ingefanele. Ungabuza imibuzo, uvume ama-logistics, futhi ubeke okulindele mayelana nokuhlala ngaphambi kokuvuma noma yini.
Ungasebenza ngqo nabalingani bethu abangenzi inzuzo ukuze uthole ukuthi ungazilungiselela kanjani ukufika kwezivakashi zakho. I-Help Center Yezindlu Zezinhlekelele ihlanganisa amalinki ezinsiza kanye nezimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa, futhi ithimba lethu lilapha ukukusekela uma unemibuzo njengoba ulungela ukubungaza.
Indima yakho nje ukunikeza izivakashi indawo efudumele futhi usize ngokuphendula noma yimiphi imibuzo ephakamayo.
Igumbi elingasebenzi noma indlu yezivakashi
Ukutholakala kwamasonto amabili noma ngaphezulu
Ubani esihlanganyela naye
Sihlangane nezinhlangano, kokubili zomhlaba nezendawo, ukuze siyiqonde ngempela imiphakathi esiyisebenzelayo nokuthi singabasiza kanjani kangcono. Lezi zinhlangano ezingenzi inzuzo ezisemthethweni zisebenzisa Izindlu Zezinhlekelele ukutholela amaklayenti azo izindawo zokuhlala kanye nokusiza ukuhlinzeka ukwesekwa kwababungazi ngesikhathi sokuhlala.
Lapho sisahlala e-Airbnb abanye omakhelwane bethu baqala ukukhuluma nathi futhi bahlangana nathi-- banikeza usizo. Kufana neplanethi, ngaphakathi kulo mphakathi. Kufana nephupho kithi.
Isivakashi Sezindlu Zezinhlekelele e-Denver